Rehefa Tsy Mandray Andraikitra Ny Polisy Dia Miditra An-Tsehatra Ny Olon-Tsotra Tia Mampita Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Thalia Rahme
Voadika ny 14 Febroary 2014 23:56 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Italiano, Português, русский, Français
Fotoana fohy taorian'ny famoahan'ireo olon-tsotra tia mampita vaovao ny fihoara-pahefana mivandravandra nataon'ny polisy iray volana lasa izay, dia mbola manohitra ny tsy fitantarana ny fahadalàn'ny polisy ao an-tanànan'i Ghardaîa ihany izy ireo, ary tamin'ity indray mitoraka ity dia noho ny tsy fidirany an-tsehatra hiaro ny lehilahy iray izay novonoina ampahibemaso rehefa nalain'ny andian-jiolahy iray tao an-toerana azy.
Avo tokoa ny fifanenjanana ara-pivavahana ao anivon'ny lemak'i M'zab ity. Miezaka mafy ny mpikatroka an-tserasera sy ny olon-tsotra tia mampita vaovao mampiseho ny fifandonana maherisetra misy eo amin'ny vitsy an'isa Ibadites (izay fantatra ihany koa ao amin'ny faritra ho Mozabites) sy ny ankamaroan'ny olona izay saiky avy amin'ny fiarahamonina miozolomana sonita, amin'ny alalan'ny famoahana porofo video ao amin'ny YouTube. Nahatonga ny manampahefana alzerana hanao famotorana sy hanasazy ireo polisy tafiditra amin'ity raharaha ity ny fielezan'ny lahatsary navoakan'ny mpikatroka mampiseho ny fihoara-pahefana ataon'izy ireo amin'ny Ibadites.
Anisan'ny heloka bevava nasehon'ny mpikatroka ny raharaha nahazo an'ilay tanora Mozabite 21 taona antsoina hoe Babaousmail Azzedine. Nisy nidaroka ampahibemaso i Azzedine rehefa nalain'ny jiolahy tao an-toerana an-keriny tamin'ny 5 Febroary 2014. Maty noho nyy ratra nahazo azy ilayy tanora, taorian'ny tsindron'antsy 21 nahazo azy!
Niely haingana ilay lahatsary ary niteraka fanafintohinana rehefa navoakan'ny tranonkalan'olo-tsotra tia mampita vaovao Envoyés Spéciaux Algériens (Iraka Manokana Alzeriana) [fr, ar] sy ny tranonkalam-baovao mahaleotena Algérie-Focus [fr] tamin'ny alalan'ny YouTube. Nivoaka indrindra izany tamin'ny fotoana nandehanan'ny Minisitry ny Atitany sy ny Lehiben'ny Polisy Alzeriana nitsidika tany amin'ny faritra handamina ny raharaha. Fa mbola mila misambotra izay rehetra tafiditra amin'ity raharaham-pamonoan'olona ity ny tompon'andraikitra ao an-toerana, saingy efa nisy ny famotorana nataon'ny tafi-pirenena hisamborana ireo mpamono an'i Azzedine, izay azo fantarina tsara ao amin'ity lahatsary ity:
Mandritra izany fotoana izany, maro ireo fikambanana an-tserasera no niara-miasa hanaitra ny manampahefana alzeriana amin'ny toe-draharaha ao amin'ny faritra sy hanery azy ireo handray andraikitra hanoherana ny herisetra ara-pivavahana misy ao M'zab. Ny Ghardaïa News [fr] sy ny Ahdath Ghardaïa [fr, ar] no tranonkalam-baovao roa izay tsy mitsahatra ny mitolona hitatitra ny herisetra mahazo ny mponina Mozabite.
Azia Afovoany sy Kaokazy 17 ora izay